Nnukwu onye ndu ụka katọliki n'ala anyị bụ Kadịnaa Arinze mere ka a mara nke a n'okwuchukwu o kwuru n'emume àjà dị nsọ a chụrụ n'ụlọ ọgbakụ ezumezu TETFUND, nke mahadum Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu dị n'Ịgbarịam, na steeti Anambra.
Kadịnaa Arịnze mere ka a mara na ekpere na ịgụ akwụkwọ nsọ n'ihe dịkarịsịrị mkpa mmadụ ọbụla ga-emere onwe ya na ndụ a, maka na okwu Chineke adịghị agbacha agbacha; ma sị kwa na ọ ka mma ka mmadụ bi n'elu ụwa a na-akwado maka ọbịbịa nke onye nwe anyị n'ụbọchị ọbụla nke ndụ ya.
O kwukwara na onye ọbụla bụ ezi nwaafọ nwere ọrụ pụrụ iche dịịrị ya n'iwulite na mmepe obodo, ebe nne na nna na ụmụaka nwegasịkwara ọrụ dị iche iche dịịrị ha, ma n'ezinaụlọ, n'ụlọ ụka na n'obodo.
N'okwu nke ya, onyeisi mahadum ahụ, bụ ọkammụta Fidelis Okafọ, kelere ya bụ nnukwu onye ndu ụka n'ala anyị maka àjà dị nsọ ahụ, ma sịkwazie na ọbịbịa ya n'ụlọ akwụkwọ ga-eweta ọtụtụ ngọzị nye mahadum.
A nọkwazịrị na ya bụ mmemme wee kpee usoro ekpere pụrụ iche, rie oriri nsọ, chụọ kwa aja ekele pụrụ iche.